झापामा यिनै पुरुषलाइ २ जनाले गरे क’रणी, रुँदै सुनाए त्यो बेलाको क्षण (भिडियो सहित)
Homeसमाचारझापामा यिनै पुरुषलाइ २ जनाले गरे क’रणी, रुँदै सुनाए त्यो बेलाको क्षण (भिडियो सहित)
February 16, 2021 admin समाचार 4834
विश्वमा अन्य मुलुकमा यस्ता घट’ना भएको भएपनि नेपालमा भने पुरुषलाई यस्ता घ’टना भएको समाचार विरलै आउने गरेका छन् । झापमा कर ‘णीमा परेका एक पुरुषको उप’चार सुरु गरिएको छ । उनी सा’मू’हि’क कर’णीमा परेको बताइएको छ । झापाको कंकाई नगरपालिका ७ निवासी पुरुष माथि यस्तो घ’टना भएको हो ।
घटनामा संल’ग्न भएको अभियोगमा दुई पुरुष नै प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ । प्रहरीले घट’नाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । शनिबार झापाको कनकाई नगरपालिका–७ बिरिङ नदी किनारमा दुई पुरुष सं’गग्न भएर एक पुरुष माथि यस्तो घ’टना गराएका हुन् । उनलाई घा’इते अव’स्थामा अस्पताल लगिएको छ ।
उनको अहिले विर्ता सिटी अस्पतालमा उप’चार जारी छ । उनले आफुलाई भएको घ’टनाको बारेमा बताएका छन् । उनी बोल्न सक्ने भएका छन् । पक्राउ पर्नेमा कन’काई नगरपालिका–६ का १९ वर्षीय पारस तामाङ र कनकाई नगरपालिका–७ का २१ वर्षीय विनोद टु’डु रहेका छन्।
उनीहरुले कनकाई–७ का ३० एक वर्षीय पुरुषलाई खोला कि’नारमा लगी कर ‘णी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घ’टनामा पर्ने पुरुषको परिचय गो’प्य राखिएको छ । घा’इतेको बिर्तामोडस्थित बिर्तासिटी अस्पतालमा उप’चार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका दुवैजनामाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रह’रीले जनाएको छ। – इताजा खबरबाट
मदनकृष्ण श्रेष्ठको स्वर र अभिनयमा ‘फुल बुट्टे सारी’ बोलको गीत सार्वजनिक (हे’र्नुहोस् भिडियो)
सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, तोलामा कति पुग्यो हे’र्नुहोस्
सडकमा मकै पोल्दा पोल्दै रोईन् आमा, मध्यरातमा के भयो यस्तो ? (भिडियो सहित)
March 11, 2021 admin समाचार 4317
६० बर्षकी लक्ष्मी पाण्डे चितवनमा पो’लेको मकै बेच्दै आएकी छन् । मकै बेचेरै उनको घर’खर्च चल्ने गरेको छ । उनी बिहानभर गाउँगाउँमा गएर हरियो मकै सं’कलन गर्छिन् । संक’लित हरियो मकै उनले बेलुका अबेरसम्म बेच्छिन्
सबिता भण्डारी प्र’करणबारे अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कर्किले गरे ड’ रलाग्दो खुलासा, छोरा को सँग बस्छ ?(भिडियो सहित)
June 19, 2021 admin समाचार 2947
आफ्नै ससुराले बुहारीको गो’प्य अ ‘ङ्ग मा छु ने जस्ता न’राम्रा ह’र्कत गरेका भिडियोहरु एकाएक मिडियामा आइरहेका छन् । परिवारभित्रै असुर’क्षित बनेका छन् नेपालमा महिलाहरु भन्दै धेरैले यस घ’टनाको वि रोध’ ग रेका छन् ।
कोरोनाका का’रण भारतीय कलाकार बिक्रमजीतको नि’धन
May 1, 2021 admin समाचार 4134
बलिउड अभिनेता विक्रमजीत कंवरपालको कोरोना संक्र’मणका कारण नि’धन भएको छ । उनी ५२ वर्षका थिए । अमर उजालामा प्रकाशित समाचार अनुसार फिल्म निर्माता अशो’क पण्डितले अभिनेताको नि’धनमा शोक व्यक्त गरेका छन् । ‘आज बिहान कोभिडका
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (223012)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (215027)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214703)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (212996)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211876)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210822)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209428)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209321)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195038)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177985)